I-Tieqi Rest House-igumbi lokupakisha elijikeleze isiqithi (nceda ufunde isishwankathelo ngaphambi kokuba wenze ugcino)
Igumbi elise- ihostela sinombuki zindwendwe ongu鐵騎休息棧
Wamkelekile ukujoyina Line ID: isohoday
Nceda uye kwiinkqubo zesatifikethi ngaphambi kokuba ubhukishe.Kubasebenzisi abangaziphumelelanga iinkqubo zesatifikethi, uncedo lobuchwephesha kweli qonga alunakubonelelwa. Nceda uqhagamshelane nam ngenkonzo yabathengi esemthethweni okanye ujonge umgca wokuqala.
Igama lale venkile yi-Tieqi Rest House, kwaye umntu oza kuqhagamshelwana naye kule ndawo yiNqolowa; akukho mihombiso intle, akukho ndawo yeentaba nemilambo enokuyonwabela, kodwa izele yingqolowa eshushu, kwaye ngamanye amaxesha ndiyathenga. iziqhamo endizithandayo ngamaxesha athile okanye amashwamshwam, iimveliso Ice zibonelelwa simahla. Mhlawumbi kufuneka ithuba lokuba babe ngabahlobo zabanye kwaye imkhaphe ukuba baxoxe nawe.
Ukuba ungumhambi onesithukuthezi okanye othanda ukwenza abahlobo, kwaye uthanda iincoko ezinobuqili, ezingenangqondo, sinokufumana ithuba lokuba ngabahlobo, kwaye siya kusebenzisana kunye nokunxibelelana ngezinye iindlela kwixesha elizayo.
Ecaleni kwendlela enkulu, yindawo efanelekileyo yokufumana indawo yokuhlala ngexesha lohambo.Ukuba ujonge phambili kubunewunewu bangaphakathi kunye neendawo ezintle zomhlaba, okanye ububele obuphezulu kunye nokwamkela iindwendwe, nceda uye kwenye indawo ukwenza ukhetho lokuphepha. msantsa zokwenyuka. Ngapha koko, Ingqolowa kwakhona, ukhangela phambili ukwenza abahlobo abaninzi.
UMai Mai unokunika kuphela uncumo oluvulekileyo kunye neencoko ezingenangqondo. UMai Mai ngumnini-mhlaba othanda ukwenza abahlobo, kwaye ubonelela ngeendawo zobusuku obutofotofo kangangoko kuhlahlo lwabiwo-mali lwakhe oluhlala luhleli.
Uvavanyo londwendwe luhlala luziinkwenkwezi ezintlanu kuphela.Impendulo engalunganga yondwendwe kwizindlu iyakuqondwa ngokunyaniseka okukhulu kwaye iya kuphuculwa ngomzamo omkhulu.Isiqithi sonke luhlobo lokuziphucula kunye nokuphuculwa okuqhubekayo komgangatho wendawo yokuhlala. kwi Homestay. injongo engatshintshiyo zengqolowa.
Yafang okanye Tongpu
(Oko kuthetha ukuba onke amagumbi abelana ngegumbi lokuhlambela. Ukuba ufuna ukubandakanya indawo yokuhlambela, nceda usebenzise umgca ukuze ubuze. Ukubuza akuthethi kuthethathethwano. Ingqolowa ikwafuna ingeniso ukuze izinze.)
Akukho zithintelo zokufikelela ekungeneni nasekuphumeni. Nceda uhlise ivolyum emva kwe-22:00 ukunqanda ukuphazamisa ezinye iindwendwe.
Ukuba uzisa izilwanyana zasekhaya kwigumbi, nceda uthintele ukuba zihambe ziyolala.Eyona ndlela ingcono kukuzizisa eyakho ibhegi yokuphuma.
Ihotele ikufuphi neendlela ezinkulu. Ukuba awukwazi ukwamkela ingxolo yendlela, nceda uphephe iiholide ezilandelelanayo. Ingqolowa inokunqanda ukufumana uphononongo olubaxiweyo olugqithisileyo lwengxolo yendlela.
Igama lale venkile yi-Tieqi Rest House, kwaye umntu oza kuqhagamshelwana naye kule ndawo yiNqol…
4.59 (iingxelo zokuhlola 64)
Section 2, Zhongshan Road, Fangliao Township, Pingtung County, Taiwan 940
Imarike yasebusuku yaseShuidiliao: Vula rhoqo ngoLwesine.
I-Adong Hot Pot: Ilali encinci enexabiso elikhulu imbiza eshushu evulekileyo enokuvulwa kude kube yintsimbi yokuqala okanye yesibini ekuseni.
I-Wulu Rice Bun: Ukukhetha ukuphepha ukuduma, incasa iyafana kulo lonke elaseTaiwan.
I-Fangliao Fishing Port: Imibungu eyojiweyo kunye nokutya okuncinci okukhethekileyo, unokubukela ukutshona kwelanga ukusuka apha.
Isikhululo saseFangliao: Eyona ndawo ilungileyo ungalithathi ikhadi lokuphila ixesha elide, thatha uloliwe oya eTaitung ngentsasa elandelayo, ugqibezele elona candelo lidinayo lokujikeleza ngaphandle kokudakumba nokuphefumla, hahahahaha~~~
Umbuki zindwendwe ngu- 鐵騎休息棧
Kuphela ziibhayisekile, oololiwe okanye abahambi ngeenyawo abajikeleze isiqithi abavumelekileyo ukuba bangene. Ingqolowa iyakuvuyela ukukwazi ukukunika iinkonzo.
Ukuba unezinye iimfuno zendawo yokuhlala, nceda ube nomonde ukubuza malunga nohlobo lwegumbi ukuphepha ukulindela ngokugqithiseleyo, kwaye wongeze uphononongo olubi.Ingqolowa iya kuzalisekisa uxanduva lwayo lokwazisa uhlobo lwegumbi ngokupheleleyo.